के सेयर बजार घट्दैमा चिन्ता लिनुपर्छ ? हेर्नुहोस् बफेट, बोगल र वित्तीय योजनाकारका सटिक विचार
काठमाडौं : अहिले नेपालसहित विश्वका प्रमुख सेयर बजार घट्दोक्रममा रहेको छ । बढ्दो ब्याजदर र महँगीका कारण सेयर बजारमा नकारात्मक असर परेको हो । पछिल्ला केही महिनायता विश्वभरका लगानीकर्ताहरुले सेयर बजारबाट अरबौं डलर गुमाइसकेका छन् । अवकासका लागि बचत गरिरहेका थुप्रै लगानीकर्ताहरु अहिलेको निराषाजनक बजारमा के गर्ने भनेर सोचिरहेका छन् । तर प्रख्यात लगानीकर्ता वारेन बफेटको सुझाव भने निकै सामान्य रहेको छ । बफेट भन्छन्, ‘घट्दो बजारका बारेमा धेरै चिन्ता नगर्नुहोस् ।’
वारेन बफेटले सन् २०१६ मा सेयर बजार तीब्र उतारचढाव भइरहेका बेला सीएनबीसीसँग भनेका थिए्, ‘बजारलाई धेरै नजिकबाट नहेर्नुहोस्’। बफेटले थप प्रष्ट पार्दै भनेका थिए, ‘राम्रा कम्पनी किनेर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताहरुले १०, १५ वा २० वर्षपछि नतिजा देख्नेछन् ।’ अर्थात, दीर्घकालीन लगानी गर्नेहरुले बजारको अल्पकालीन उतारचढावको चिन्ता लिनुपर्दैन । सेयर किनेर बेचिहाल्न खोज्नेहरुका लागि भने यस्तो बेला नतिजा राम्रो नहुने बफेट बताउँछन् ।
बफेटका अनुसार लगानीमा लामो समयसम्म राम्रा कम्पनीहरुको स्वामित्व लिएर मात्र पैसा कमाउन सकिन्छ । बफेट जस्तै अर्का प्रख्यात लगानीकर्ता ज्याक बोगलले पनि घट्दो बजारमा ‘बाई एन्ड होल्ड’ रणनीति नै अपनाउन सुझाव दिएका छन् । बोगलका अनुसार सेयर बजारमा जस्तोसुकै अवस्था उत्पन्न भए पनि केहिले बाहिर निस्किने र कहिले बजार पस्ने गर्नुहुँदैन । कुनै न कुनै रुपमा जुनसुकै बेला पनि बजारमै रहनुपर्ने बोगलको सुझाव छ ।
यता, वित्तीय सल्लाहकारहरु पनि विविधीकरण गरिएको पोर्टफोलियो र लामो समयसीमा राखेर लगानी गर्नेहरुलाई राम्रो स्टकबाट घाटा हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहने बताउँछन् । बजारको ट्रेन्ड अनुसार प्रतिक्रिया गर्न खोज्ने अधिकांश लगानीकर्ताहरुलाई नोक्सान हुने सम्भावना बढी हुन्छ । तसर्थ, बजारको उतारचढावलाई धैयताका साथ पर्खिनु नै राम्रो हुने उनीहरु बताउँछन् ।
अमेरिप्राइज फाइनान्सियलका वित्तीय सल्लाहकार सन एम. पियरसन भन्छन्, ‘बजार तल आएको बेला आत्तिएर सेयर बेच्नेहरुले वास्तवमा आफ्नो दीर्घकालीन वित्तीय योजनाहरु माथि नै घात गरिरहेका हुन्छन् ।’ बजार कहिल्यै पनि तल्लो विन्दुमा आएर सेटल हुँदैन । अल्पकालमा बजार घटे पनि दीर्घकालमा बजार माथितिरै जाने हो । सकारात्मक समाचारहरु आउन सुरु गर्नुअघि नै बजारमा सुधार भइसकेको हुन्छ । तसर्थ, बजारको रिकभरी फेज गुमाएमा आफ्नो वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्न झनै गाह्रो हुन सक्ने पियरसन बताउँछन् ।